जीवनमा सफल हुन के गुर्नपर्छ ?
एजेन्सी । असफलता सफलताको विकल्प कहिले पनि हुन सक्दैन । असफलतालाई सबैले आफैबाट टाढा राख्न खोज्छन् । तर, हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा एक पटक न एक पटक असफलता भोगेकै हुन्छन् ।
एक असफलता पछि धेरै मानिसले आफु बर्बाद भएको सोच्छन् र हरेस खान्छन् । तर, खासमा भन्ने हो भने साहसी मानिसलाई असफलताले केही फरक पार्दैन । उदाहरणको लागि यी ६ जना उद्यमीहरुलाई लिन सकिन्छ । उनीहरु ठूला असफलताहरुलाई चिर्दै अघि बढेका हुन् र अन्त्यमा उनीहरुको कथा धेरै ठूलो सफलतामा गएर टुगिंंन्छ ।
उनीहरुले आफ्नो करिअरको सुरुमा ठूलो असफलता पाएका थिए । पछि उनीहरु आफ्नो लक्ष्यमा बिचलित भएनन् र कहिल्यै हार मानेनन् । असफलताबाट मानिसले कस्तो प्रतिक्रिया जनाँउछन् र त्यसबाट कस्तो पाठ सिक्छन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरु नै असफलताले तपाईलाई आफ्नो सपना र भिजन पछ्याउन रोक्दैनन् भन्ने कुराको प्रेरणा हुन सक्छन् ।
४. वाल्ट डिज्नेलाई भनिएको थियो उनीसँग सिर्जनात्मकता छैन
५. स्टिभ जब्सलाई आफ्नै कम्पनीबाट हटाइएको थियो
यी कथाहरुबाट तपाईले पनि प्रेरणा पाउन सक्नुहुनेछ र यदी तपाईले असफलता पाउनुभयो भने पनि आत्तिनु हुँदैन । कुनै असफलताहरु यति कठोर ह्ुन्छन् कि त्यसले तपाईको बाटो सकिएको जस्तो लाग्छ तर यो सम्झिनुहोस कि यस्ता धेरै सफल मानिसहरु छन् उनीहरु पनि धेरै असफलता र हन्डरलाई चिर्दै अगाडि बढेका हुन् ।
त्यसैले आफ्नो गल्तिहरुबाट पाठ सिक्नुहोस, कमजोरी र असफलता स्विकार्नुहोस् । तर आफ्नो लक्ष्य र सपना प्राप्त गर्नको लागि हरदम प्रयास गर्नुहोस ।